Izindaba - 2021 Quanzhou Foreign Trade Seminar
Ukuhlaziywa Kwezingozi Zezomthetho Kuzinkontileka Zezokuhwebelana Kwamanye Amazwe-Ummeli uHuang Qiang
Imibuzo ebuzwa njalo: ukwakheka kwenkontileka, ukuthengisa, izindaba zezinkampani, ukubambezeleka kokulethwa, izingqinamba zekhwalithi, imigomo yezohwebo, inani lesikweletu, ukudluliswa kwe-offset, isikweletu sokwephula isivumelwano, noma ngabe siyimpikiswano yezohwebo, izindaba zenqubomgomo yomshuwalense.
Inkontileka iyasungulwa: Icala 1 ukuthi ifektri yenkontileka negama lenkampani eliboniswe kusitifiketi akulona igama lenkampani yomthengi, futhi inkontileka ayikwazi ukusetshenziswa ukuqinisekisa isiqiniseko sobudlelwano besivumelwano phakathi kwala maqembu womabili.
Icala 2 Inkontileka isayinwe ngumthengi, futhi isijobelelo sewebhusayithi esemthethweni yomthengi sihlukile, nokuthi umuntu oxhumana naye uyangabazeka. Umfundi wenkokhelo yomthwalo, inombolo yocingo ayihambelani nomthengi, futhi othumela impahla ngaphandle akakwazi ukufakazela ukuthi abayisikhombisa basifezile isibopho sokuletha kumthengi nokuthi umthengi uzitholile izimpahla.
一 、 Buyekeza isimo esiyisisekelo samaqembu enkontileka
1) Igama: Ingabe kuyahambisana? Ingabe kunezinhlamvu ezihlukile? Ingabe kunamabha amaningi, amachashazi, izikhala, ezinye izimpawu, njll.
2) Ububanzi bebhizinisi: Ukuthi umkhiqizo othengiwe uyahambisana yini nebhizinisi eliyinhloko, nomuntu osengozini yokukhwabanisa.
3) I-imeyili: Ingabe i-imeyili yenkampani? Ingabe isijobelelo sifana ncamashi nesijobelelo esisemthethweni somthengi? Isijobelelo sifana kuphela, futhi nethuba lokukhwabanisa likhulu. Ezimweni ezimbi kakhulu, umthengi akakaze abhalise ibhokisi leposi lenkampani, kanti umuntu wesithathu ubhalise ngokukhwabanisa.
4) Inombolo ye-akhawunti yokukhokha: Hlola ukuthi ingabe iyahambisana ngokuphelele yini, futhi akumele kube khona umehluko okwehlukaniswa kwezimpawu.
5) Ikheli elibhalisiwe: Ingabe kungokwesifundazwe esihlukile kunesomthengi (njenge-United States, izifundazwe ezahlukahlukene zingabhalisa izinkampani ezinegama elifanayo ncamashi)? Ngabe ingeyamazwe ahlukene (njenge-Uganda neKenya, anegama elifanayo kepha amazwe ahlukene, akumele abe yinkampani efanayo?
6) Umqashi: Ingabe kunengozi enkulu yokuthi izimpahla zithunyelwe ezweni lesithathu? Uma izimpahla zithunyelwa kumuntu wesithathu, ingabe kukhona imiyalo ecacile evela kumthengi!
7) Umsayineli osayinile; ingabe umuntu ophethe / omele ezomthetho? Ingabe kungomunye umuntu, ingabe kukhona idokhumenti yokugunyazwa? Uma kungenakuqinisekiswa, ingabe ubuqiniso bezohwebo buqinisekiswa ngemininingwane yokuxhumana esemthethweni yomthengi?
二 、Buyekeza iziteshi
1) Iwebhusayithi esemthethweni yomthengi, izinkampani eziningi zizoba (nezimo ezimbi kakhulu zibone ubuqhetseba bewebhusayithi mbumbulu) 2) Thola umbiko wesikweletu womthengi.
Ingxenyekazi yolwazi kahulumeni yamabhizinisi omphakathi yezwe lomthengi.
I-United States: SEC.gov noma uNobhala Wezwe Wenew York kanye neBhizinisi Elisesha I-United Kingdom: Inkampani Yezinkampani, www.gov.uk
I-India: UMnyango Wezindaba Zebhizinisi UMnyango Wezindaba Zebhizinisi
ESingapore; Ukuphathwa Kwezimali Nezokuphathwa Kwamabhizinisiwww.acra.gov.sg
1) Isikhathi sokuphikisana nekhwalithi okuvunyelwene ngaso siyazuzisa futhi asinabungozi
2) imigomo yokuhlolwa okuvunyelwene ngayo
Cacisa izikhungo zokuhlola, izindlela zokuhlola, amazinga wokuhlola, njll.
I-3) Yenza ngokujulile izibopho zokuhlola ukugwema izingxabano zekhwalithi
Ukuhlolwa komuntu wesithathu efektri, kanti elinye iqembu liqinisekisa ukuthi ayikho inkinga ngekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa. Amasampula afakwa uphawu lokuhlolwa kwesampula, futhi izitifiketi zokuhambisana ezivela ezikhungweni ezisemthethweni ziyatholakala.
4) Naka ukulondolozwa kobufakazi obubhaliwe.
Ikhasimende lisiza ezinye izinkampani ukuthi zithenge njenge-ejenti. Uma kunezinkinga, umthengisi angakhetha umuntu obhekene naye (umthengi we-ejenti, noma inkampani yangempela yokuthenga, kodwa kufanele aqinisekiswe futhi avunyelwe yisiqinisekiso sesikweletu). Uma isikhethiwe, ayinakuguqulwa.
1) Kuvunyelwene ngesikhathi esinqunyiwe sokukhokha. Ingabe ukuqinisekiswa kunemibandela enamathiselwe futhi isivumelwano asicaci?
2) Ama-oda amaningi wokuthumela ngamaqoqo, naka ukubuyisana okufika ngesikhathi nomthengi ukuqinisekisa inani lesikweletu
3) Naka ukuqhathanisa isikhathi sokukhokha nenani lesikweletu nomkhawulo wesikweletu ovunyelwe yiChina Insurance Insurance.
Iseluleko sokuvimbela izingozi zokuhweba ne-United States
1) Faka umshuwalense owengeziwe
2) Uma ungakuqinisekisa
3) Qwashisa ngokuvikelwa kwamalungelo asemthethweni
4) Ukubonisana nokuhlolwa kweziqu zomthengi
Imikhiqizo nezinsizakalo ze-China Credit Insurance Ezincane Nezincane Nezinsizakalo, i-HP Pocket: Iphakheji Yezinsizakalo Zolwazi, iSeavo World APP, iSmall and Micro Academy.
1) Ufuna amakhasimende aphesheya kwezilwandle
2) Ukuqapha ubungozi nokuxwayisa kusenesikhathi
3) Thola izingozi zabathengi baphesheya kwezilwandle.
Ekuphetheni, singumkhiqizi futhi siyinkampani yokuhweba ezingxenyeni ezingaphansi kwesithuthi, izinto okufanele sizikhathalele azigcini ngokunikeza amakhasimende ethu ama-idler athembekile, ama-sprocket, ama-rollers, i-track link assy nezinye izingxenye kodwa futhi kufanele akhathalele ubungozi kulokho okwenziwayo.
Ngale ndlela kuphela lapho kungaqinisekisa khona ukuwina ibhizinisi nokusebenzisana kwesikhathi eside.
Isikhathi Iposi: Jul-18-2021